कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको इन्टरलेउकिन–६ ब्लकर औषधिले कसरी काम गर्छ? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको इन्टरलेउकिन–६ ब्लकर औषधिले कसरी काम गर्छ?
कमला गुरुङ सोमबार, असार २८, २०७८, १३:०७:००
काठमाडौं - विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले हालै मात्र कोरोना भाइरसको उपचारका लागि इन्टरलेउकिन–६ ब्लकर औषधि सिफारिस गरेको थियो। विभिन्न परीक्षणबाट कोरोना विरुद्ध उपचारका लागि प्रभावकारी पुष्टि भएको भन्दै डब्लुएचओले इन्टरलेउकिन–६ ब्लकर औषधि सिफारिस गरेको हो।
इन्टरलेउकिन–६ ब्लकर औषधि नेपालमा पनि भित्र्याइएको छ। नेपालमा टोसिलिजुमाव नामको उक्त औषधि प्रयोगमा ल्याइएको छ।
इन्टरलिउकिन–६ लाई संक्षिप्त रुपमा आइएल–६ पनि भनिन्छ। आइएल–६ साइटोकाइन्स अर्थात् प्रोटिन हो। जसको काम रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमा हुन्छ। शरीरमा कुनै पनि किसिमको संक्रमण भए त्यसलाई निको बनाउन आइएल–६ ले एन्टीबडी उत्पादन गर्छ। यो आइएल–६ शरीरमा सन्तुलित मात्रामा हुन आवश्यक छ। यो धेरै उत्पादन भए शरीरमा हानी गर्छ र कोषिकाहरुलाई नष्ट गर्न थाल्छ।
कोरोना भएका बिरामीहरुमा आइएल–६ बढी मात्रामा उत्पादन हुने गरेको पाइएको छ। आइएल–६ को मात्रालाई सन्तुलनमा राख्न इन्टरलेउकिन–६ ब्लकर औषधि अर्थात् टोसिलिजुमाव औषधि प्रभावकारी देखिएको शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका फार्मेसी विभाग प्रमुख अनिश श्रेष्ठले बताए।
उनका अनुसार आइएल–६ सन्तुलनमा आएपछि कोषिकाहरु नष्ट हुनबाट जोगिन्छ। आइसीयू तथा भेन्टिलेटरमा रहेर उपचार भइरहेका बिरामीहरुमा कोरोनाले निम्त्याउने थप जटिलताहरु कम गराउँछ।
औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापन सन्तोष केसीले कोरोना दोस्रो लहरदेखि नै नेपालमा पनि टोसिलिजुमाव औषधि प्रयोग गरिदै आएको बताए। यो औषधिले कोरोना संक्रमितमा भाइरसले निम्त्याउन सक्ने जटिलता कम गर्ने गरेको उनले बताए। नेपालमा केही दिनअघि मात्र टोसिलिजुमावको ३ सय भाइल औषधि काठमाडौं भित्रिएको थियो।
उनले भने, ‘यो औषधि कोरोना संक्रमितहरुमा प्रभावकारी देखिएको छ। भाइरसले निम्त्याउने जटिलता कम गर्न यसले मद्दत गर्दछ। नेपालमा दोस्रो लहरदेखि हामीले यो औषधि पनि प्रयोग गरेका छौँ।’
इन्टरलेउकिन–६ ब्लकर औषधि कस्तो हो र यसले शरीरमा कसरी काम गर्छ? भन्ने विषयमा हामीले अनिश श्रेष्ठसँग थप जानकारी लिने प्रयास गरेका छौँ।
उक्त औषधिका बारेमा उनले दिएका जानकारी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
इन्टरलिउकिन–६ लाई आइएल–६ पनि भनिन्छ। आइएल–६ साइटोकाइन्स हो। जसको काम इम्युन सिस्टममा हुन्छ। साइटो भनेको कोष र काइन्स भनेको कोषको मुभमेन्ट हो। यसले विभिन्न संक्रमण भएको ठाउँमा कोषहरु पुर्या‍उँछ। इन्टरलिउकिन–६ प्रोटिन हो। जुन शरीरमा प्राकृतिक रुपमा पैदा हुन्छ।
आइएल–६ ले एन्टीबडी उत्पादनका लागि शरीरमा संक्रमण भएको, सुन्निएको ठाउँमा निको बनाउन कोषिकाहरु पठाउँछ। अहिले कोभिड १९ सँग जोडेर हेर्दा कोभिड भएका बिरामीहरुमा आइएल–६ एकदमै बढी मात्रा पाईन्छ। आइएल–६ बढी मात्रा भए रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता एकदमै धेरै हुन्छ। जसले गर्दा फोक्साको कोषिकालाई नष्ट गर्छ। फोक्सोको कोषिकालाई नष्ट गर्न थालेपछि श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर पर्ने भयो। यो सँगै अन्य अंगहरु पनि फेल हुने संभावना बढेर जान्छ।
शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएपछि यसले आफ्नै शरीरको कोषिकाहरुलाई नष्ट गर्न थाल्छ। इन्टरलिउकिन–६ इनीबिटर (आइएल–६ ब्लकर) जस्तै टोसिलीजुमाव ले आइएल–६ को मात्रालाई सन्तुलनमा राखी थप जटिलता निम्त्याउनबाट जोगाउँछ।
शरीरमा बढेर गएको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई सन्तुलनमा ल्याउन आवश्यक हुन्छ। इन्टरलिउकिन–६ इनिबिटर अर्थात् टोसिलीजुमाव औषधि बढेर गएको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई सन्तुलनमा ल्याउन काम गर्छ।
आइएल–६ सन्तुलनमा आएपछि कोषिकाहरु नष्ट हुनबाट जोगिन्छ। जसले गर्दा निमोनिया हुने तथा श्वासप्रश्वास प्रणालीमा समस्या हुनेहरुलाई फाइदा गर्छ। श्वासप्रश्वासमा सहज हुन्छ। आइसीयू तथा भेन्टिलेटरमा रहेर उपचार भइरहेका बिरामीहरुलाई यो औषधिले राम्रो गर्छ। कोरोनाले निम्त्याउने थप जटिलताहरु कम गराउँछ।
हाल विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको आइएल–६ इनीबिटर हो, जसले बढी भएको आइएल–६ लाई ब्लक गर्छ। आइएल–६ इनीबिटर भनेको यही टोसिलीजुमाव औषधि नै हो।
कोभिड भएका बिरामीहरुमा आइएल–६ किन बढी मात्रामा हुन्छ भन्ने यकिन यही कारण नै छैन। यो भाइरसले आइएल–६ सहित शरीरका अन्य कुराहरुमा पनि असन्तुलित बनाईदिन्छ। आइएल–६ बढी भयो भने शरीरको कोषिकालाई हानी गर्छ।
इन्टरलिउकिन–६ शरीरलाई आवश्यक छ। तर बढी भयो भने यसले हानी गर्ने हो। इन्टरलिउकिन–६ ले एन्टीबडी बनाउने हो। तर यो बढी मात्रामा हुँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै हुन्छ, जसले गर्दा आफ्नै कोषिकालाई नष्ट गर्न थाल्छ।
कोभिड भएका व्यक्तिको शरीरमा यो किन पैदा हुन्छ भन्दा शरीरमा संक्रमण देखिएपछि त्यसलाई निको बनाउन इन्टरलिउकिन–६ पैदा हुन्छ। तर यो भाइरसले गर्दा धेरै मात्रामा उत्पन्न भइदिन्छ। जसले गर्दा यसले आफ्नै कोषिकाहरुलाई नष्ट गर्न थाल्छ।